Puntland Voice – Page 1041 – Codka Dalka iyo Dadka
Xulka Qaranka K/cagta Dalak Brazil oo gaaray Dalka Koonfur Afrika
Xulka Barazil ayaa 27-kii bishaan soo caga dhigtay Dalka Koonfur Afrika , iyagoo noqonaya xulkii labaad ee koobka adduunka ka qeybgalaya oo soo gaara South Africa waxaa ka horeeyay xulka Australia. Guddiga qabanqaabada 2010 FIFA World Cup, oo uu matalayo […]
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka sudan oo ka qeyb galay caleemasaarka madaxweynaha dalka sudan.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Sudan Proff:Mahdi Abuubakar ayaa shalay ka qeyb galay caleemasaarka madaxweynaha dalka sudan Md Cumar xasan axmed albashiir oo kusoo baxay doorashada dalka sudan bishii aynu kasoo gudubnay isagoo helay codad gaaraya 68%kiiba . Proff:Mahdi oo […]
Xaflad lagu xirayo dugsiga sare ee Burtinle sanad dugsiyeedka 2009/2010 oo kadhacdey hoolka shirarka dugsiga sare ee burtinle
Xafladaan oo ay kasoo qeyb galeen dad weyne aad ufara badan ayaa waxay kusaabsaneyd xiritaanka sanad dugsiyeedka 2009/2010 Waxaana ugu horeyn xaflada furey maamulaha dugsiga sare ee degmada burtinle Axmed c/risaaq cali oo kudheeraaday bilowgii dugsiga sare ilaa hada oo […]
Kooxda Inter Milan oo Xalay hanatay Koobka Horyaalad Yurub (Sawiro Badan)
Madrid (AB):-Kulankii ugu danbeeyay Koobka Horyaalada Yurub (Chanpion leagua) ayaa xalay waxaa uu dhexmaray Kooxaha Inter Milan iyo Byer Munich oo ka kala dhisay Dalalka Talyaaniga iyo Jermany. Ciyaarta oo aad u xiisa badneyn marka la eego daawadayaashii ka soo […]
WAR DEG DEG AH: Shariif Xasan Sh.Aadan oo Galabta si rasmi ah loogu doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka Dowlada KMG Soomaaliya.
Muqdisho (AB):-Galabta casarkii kadib ayaa si rasmi ah waxaa hoolka Xarunta Baarlamaanka ee Muqdisho loogu doortay Gudoomiyaha Baarlamaanka Xildibaan Shariif Xasan Sh.Aadan markii tartan saaka soo bilowday uu hada soo gabagaboobay. Wararka aan xarunta Baarlamaanka ka haleyno ayaa sheegaya in […]
Ciidamo ka tirsan Ururka Ahlu suna oo dib ula wareegay Tuulooyin Saaka lagala wareegay
Ciidamo ka tirsan Ururka Ahlu suna oo dib ula wareegay Tuulooyin Saaka lagala wareegay Wararka ka imaanaya tuulooyinka Galqoryaale,Ceeldheere iyo Mareerguur ayaa sheegaya in halkaasi ay dib uga baxeen Ciidamado ka tirsan Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin oo Saaka gaaray tuulooyinkaasi. Ciidamo […]
WAR DEG DEG AH: Ciidamada AMISOM oo Salaadii Jimcaha ee Maanta si ula kac ah Baabuar u marsiiyay nin ku tukanayay Masaajid ku yaal Isgoyska KM4
Ciidamada Shisheeye ee ka socda Dalak Uganda islamarkaana ku sugan Muqdisho ayaa Maanta Salaaii Jimcahaintii lagu jiray waxay si ula kac ah Baabuur Dagaal u kor mariyeen muwaadin Soomaaliyeed oo salaad ku horrtukanayay Masaajid ku yaal Isgoska KM4. Qofka Soomaaliga […]
Ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo Saaka la wareegay Gacan ku haynta 3 tuulo oo hoostaga Magaalooyinka Dhuusa-mareeb iyo Guri-ceel
Ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab oo Saaka la wareegay Gacan ku haynta 3 tuulo oo hoostaga Magaalooyinka Dhuusa-mareeb iyo Guri-ceel Tuulooyinka kala ah Galqoryaale,Ceeldheere iyo Mareerguur ayaa Saaka gacanta u galay Ciidamo ka tirsan Xarakada Mujaahidiinta Alshabaab halkaasoo ay […]
Prof Dalxa oo la sheegay ion sharci ahaan uu wali yahay Gudoomiye u xigeenka 1aad ee Baarlamaanka
Xeer Ilaaliyaha guud ee Dowlada KMG Soomaaliya C/laahi daahir Bare ayaa difaacay xilka uu hayo Gudoomiye xigeenka 1aad ee Baarlamaanka Prof.dalxa isagoo sheegay in sharci ahaan uu mas’uulkaasi xilka yahay Gudoomiye xigeenka. Waxaa uu intaasi ku daray in sharci ahaan […]
Roobab lagu diirsaday oo saacado badan ka da'ay Magaalada Muqdisho
Ku dhawaad 12 saac oo xiriir ah ayaa roobab lagu diirsaday waxay ka da’een Magaalada Muqdisho kuwaasoo soo bilowday xalay fiidkii ilaa Saakana soo gaaray,waxaana ku diirsaday dadka reer Muqdisho oo kuleylo ku soo jiray xiliyadaan danbe. Roobka waqtiga badan […]